७८ वर्षका वृद्धले १७ वर्षकी किशोरीसँग बिहे गरे, बिहेको २२ दिनमै किन गर्नुपर्‍यो डिभोर्स ? – Dcnepal
७८ वर्षका वृद्धले १७ वर्षकी किशोरीसँग बिहे गरे, बिहेको २२ दिनमै किन गर्नुपर्‍यो डिभोर्स ?
प्रकाशित : २०७७ मंसिर १ गते १७:५२
काठमाडौं। अघिल्लो महिना ७८ वर्षका वृद्धले १७ वर्षकी किशोरीसँग विवाह गरेको घटनाले निकै चर्चा पायो । घटना इण्डोनेसियाको थियो । यो जोडीले खुसीसाथ बिहे गरेका थिए । तर, विवाहको २२ दिनमै यो जोडीको जीवनमा ठूलो घटना भयो । इण्डोनेसियाको पश्चिम जावाको सुवाङमा यो जोडीले विवाह गरेको २२ दिनमै सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । स्थानीय मिडिया रिपोर्टअनुसार गएको अक्टोबर ३० मा उनीहरुको सम्बन्धविच्छेद भएको छ ।